गुलाबी zoster (Gibert) - चिन्ता छैन
Ringworm गुलाबी Gibert (pityriasis rosea) एक संक्रामक-एलर्जी प्रकृति भइरहेको एक गैर-घातक छाला गठन छ। रोग नै छैन खतरनाक भएको जीव छ लागि हो, तर यो धेरै अप्रिय हुन सक्छ। सामान्यतया, यो रोग अप छ हप्तामा गर्न, गम्भीर अवस्थामा अप9सप्ताह गर्न रहन्छ। धेरै शायद, विरामीहरु अप छ महिना छ।
गुलाबी Gibert मानव शरीर आक्रमण वंचित गर्ने मुख्य चिन्ह, एक ठूलो गोलो स्थलहरू वा सजीले मातृ रातो वा शरीर मा उपस्थिति छ गुलाबी रंग। अक्सर, शिक्षा फिर्ता को छाला मा सुरु हुन्छ। एक हप्ता पछि, रोग progresses र एक व्यक्ति धेरै सानो स्थलहरू मिलेर एक दाना द्वारा कवर। व्यक्ति - घटना को सबै भन्दा साधारण साइट limbs शरीर को माथिल्लो भाग depriving छ, तर पनि प्रभावित हुन सक्छ, र दुर्लभ अवस्थामा।
त्यहाँ एक गुलाबी Gibert zoster छ कि कारण, ठीक ज्ञात छैन। तर संक्रामक रोगहरु परिणामस्वरूप रोग को उपस्थिति व्याख्या गर्न सिद्धान्त छन्। आनुवंशिक सुविधाहरू महत्त्वपूर्ण हो, रोग कुनै पनि व्यक्ति मा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। महिला प्राय पुरुषहरु भन्दा प्रभावित छन्, एक दाना कुनै पनि उमेर मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। तथ्याङ्क अनुसार, अवस्थामा 70% भन्दा श्वसन पर्चा संक्रमण खोस्नु भयो।
Gibert छैन त्यहाँ समानता छ हुनत जीवाणुहरू वा Fungi को परिणाम हो। रोग मानिन्छ तापनि गैर-संक्रामक तर अक्सर cohabiting मान्छे एकै समयमा बिरामी। जोखिम समूह रोगी को कि जस्तै स्नान मा धोए भएकाहरूलाई समावेश छ। एक तौलिया, रोगी को कोर्नु र अन्य व्यक्तिगत स्वच्छता प्रयोग नगर्नुहोस्। खेल टोली मा, zoster को प्रकोप को छाउनी, आवासगृह मा ज्ञात।
अक्सर, रोग नै व्यापक वसन्त र गिरावट मा, तर कारण पाइने फूल बिरुवाहरु गर्न देखाउनुहुन्छ।
Zoster गुलाबी Gibert विरामीहरु गंभीर बेचैनी हुन्छ। मात्र होइन खुजली र चिलाउनु, तर कहिलेकाहीं यो बुझाइएको छ र soreness Rashes। रोगी उच्च भार उजागर गर्दा वा तनाव अनुभव यो अत्यधिक तापमान उजागर छ लक्षण वृद्धि रगत प्रवाह संग थप गम्भीर छन्। यस्तो अवस्थामा, छाला को प्रभावित क्षेत्रमा inflamed बन्न र छील गर्न सुरु गर्नुहोस्।
जटिलताहरू र साइड इफेक्ट रिकभरी साधारणतया दाना रहलपहल निम्न पछि अवलोकन गरेका थिए। तथापि, विरामीहरु त्यहाँ वृद्धि गर्दा छ वा, conversely, प्रभावित क्षेत्रमा छाला को pigmentation कम। यी घटनाहरू चाँडै हुनेछ।
कारण छ कि ringworm गुलाबी Gibert सबैभन्दा गम्भीर लक्षण मनोवैज्ञानिक बेचैनी, खुजली र soreness छन्। रोग गम्भीर रोग र असामान्य को एक harbinger छैन, र एक रोग पछि एक व्यक्ति जीवनको लागि प्रतिरक्षा छ।
निदान भने "गुलाबी वंचित Gibert" उपचार आवश्यक छैन। रोग, यो आफ्नै केही हप्ता मा स्थान लिइरहेको छ को ambiguities कारण संग जडान मा दाना निको पार्न सक्दैन। केवल बिरामीको अवस्था सुधार गर्न र zoster को manifestations केही कम गर्न सक्छ लागूऔषधको मद्दत संग। rashes निर्धारित analgesics, antihistamines हटाइयो चिलाउनु देखि गंभीर दुखाइ मा। डट एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेर प्रभावित छाला scratching को फलस्वरूप scarring बच्न। कहिलेकाहीं लामो समयसम्म रोग विरोधी भडकाऊ दबाइहरु सल्लाह दिन्छन्।
depriving डेरिवेटिव उर त्वकरोग निदान। लक्षण हो herpes zoster वा herpes को manifestations धेरै समान। यस्तै दाना रूपमा उत्पन्न हुन सक्छ एक एलर्जी प्रतिक्रिया लागूऔषधको केही प्रकार। Ringworm सही बायोप्सी को विधि प्रयोग गरेर निर्धारण गर्न सकिँदैन, तर किनभने गैर-खतरनाक रोगहरु यस्तो जटिल प्रक्रिया मूर्ख बाहिर।
Myocardial infarction को गंभीर परिणाम
आँखा उपचार र कारण मा फुट्छ पोत
दुखेको घाँटी। यसको घटना लागि कारण।
Fibrillation - यो के हो? paroxysmal आलिन्द fibrillation
नङहरु Exfoliate? यो समस्या के गर्ने?
नङ "ज्याकेट" - एक क्लासिक मैनीक्योर सिर्जना गर्न नयाँ तरिका
कसरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्न - विषय मा एक निबंध "जंगल मा हिड्ने"
Sevastopol, Kerch: को शहर, मार्गहरू र तिनीहरूलाई हटाउन तरिका बीचको दूरी
जब जाडो लागि टायर परिवर्तन गर्न? मोटर चालकहरुलाई गर्न सल्लाह
कुरा अनावश्यक। अनावश्यक कुराहरू के गर्न सकिन्छ? अनावश्यक कुराहरू देखि शिल्प
मरियम Voronov। एक कोमल soprano संग गायक को रचनात्मक तरिका
पैट्रियट, लेखक र स्थानीय इतिहासकार Zavershinskiy व्लादिमीर Ivanovich
रिपोर्टर Irina Arojan: जीवनी, फोटो र रोचक तथ्य
"Rinoflomutsin": प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन
Toxemia र बच्चा को सेक्स। यो एक जडान फेला पार्न सम्भव छ?